Ku saabsan - Baaskiilka
Ma jeceshahay baaskiilka, dalxiiska baaskiilka iyo safarrada baaskiilka?
Fikradda mareegaha - blogs
BikeHike waa goob aan anigu, baaskiil jecel iyo dalxiiska baaskiilka gaar ahaan, ku wadaago macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan mawduucyo isku mid ah.
Isla mar ahaantaana, fikradda goobta ayaa ah in la awoodo dadka leh danaha isku midka ah si ay u midoobaan, ula xiriiraan oo wadaagaan macluumaadka ugu horreyn iyada oo loo marayo blogs.
Tani waa farqiga ugu weyn ee forums-ka, halkaasoo aysan jirin wax ku habboon oo ku habboon is-muujinta, halkaas oo aad ka abuuri karto mawduuc, waxaad ka saari kartaa isaga, laakiin waxaas oo dhan waxay ku kala firdhi doonaan meelahooda bannaan. Anaga, dhammaan fikradahaaga iyo aragtidaada waqti fiican ayaa lagu kaydin doonaa hal meel. Waxaad haysataa meel gaar ah oo adiga kuu gaar ah, oo aad ama rabto inaad la wadaagto dadka kale, tusaale ahaan, adoo siinaya xidhiidh saaxiib, ama aad rabto inaad keligaa kula tagto. Waxaan soo karsaday shaah, waxaan soo qaatay xoogaa rooti ah, xilliga qaboobahana waxaad xasuusataa sida aad u soo qaadatay waqti cajiib ah xagaaga. Cola lagu shubay baraf maalinta xagaaga kulul oo dib u soo kici markaad akhrinayso tacaburradaada jiilaalka.
Kani waa nooc xusuus-qor shakhsi ah, oo kaliya lagu dhejiyo bulshada ay isku fikrad yihiin, taas oo ay ugu wacan tahay waxay heli doontaa jawaab celin firfircoon.
Si tan loo sameeyo, kaliya waxaad u baahan tahay inaad isdiiwaangeliso, ka dib markaa waxaad bilaabi kartaa blog-kaaga gaarka ah.
Isu diyaarinta safarka baaskiilka
Goobtu waxay ka kooban tahay macluumaad, bilow ahaan, kugu dhiirigelinaya inaad aado safarkaaga baaskiilka ee ugu horreeya, ka dibna kuu sheegaya sida loo diyaariyo. Halkan waxa aad ku baran doontaa jidka baaskiilka aad raacayso, waxa aad ku qaadanayso, sida loo rarto, sida loo qaado baaskiilkaaga, waxa la kariyo, iwm.
Ma iska indho tiri doono arrinta doorashada baaskiilka iyo qaybaha kale, qalabka, qalabka. Tusaale ahaan, kamaraddee ayaa fiican in loo qaado socod? Xitaa halkan waxaa jira wax badan oo laga hadlayo.
Horey u soco Si baaskiilku u noqdo mid faa'iido leh oo aan waxyeello u geysan caafimaadka, waa inaad barataa naftaada farsamada baaskiilka, dooro cabbirka baaskiilka oo samee ku habboonaanta saxda ah.
Dabcan, waa inaad awood u leedahay inaad gacantaada ku hagaajiso baaskiilka, ilaaliso oo aad daryeesho. Maqaaladayadu waxay sidoo kale kaa caawin doonaan inaad hesho xirfado faa'iido leh.
Haddii aad jeceshahay goobta, haddii aad aragto rajo ah horumarinta bulshada taageerayaasha hawlaha dibadda, baaskiilada, dalxiiska baaskiilka iyo baaskiilka, ka dibna ku biir, martiqaad saaxiibada, ka tago link a goobta, halka ay suurtogal tahay, ka dibna waxaan awoodnaa. si firfircoon u kobci, caan bixi qaab nololeed caafimaad leh, haa oo kaliya "noloshu way fiicnaan doontaa, noloshu waxay noqon doontaa mid xiiso badan"
Dhammaan wanaag iyo nasiib wacan!
Qoraaga Baaskiil Hike